Android 12 na-enye ọhụụ ọhụrụ na arụmọrụ yana mgbanwe dị egwu | Gam akporosis
Android 12 na-enye ọhụụ ọhụrụ na arụmọrụ yana mgbanwe dị egwu
Onyeka Onwenu | | Noticias, Gam akporo nsụgharị
Google gosiputara n'oge Google I / O 2021 nke ozo nke sistemụ mkpanaka ya, gam akporo 12. Na ogbako ahụ maka ndị mmepe ọ nwere ike inye nkọwa nke mbụ, ịkụ nzọ na nrụpụta ọhụrụ na ọtụtụ akụkọ dị mkpa nke ga-eme ka ọ wụpụ elu na ogo ma e jiri ya tụnyere nsụgharị ndị gara aga.
Na February Google malitere nyocha nke gam akporo 12, site na taa beta mbụ nke sistemu dị, ụdị nke ga-eto ruo mgbe ụdị ikpeazụ. Enwere ike itinye beta na ekwentị dị iche iche ịhụ ihe ga-anọchi gam akporo 11 na ọnwa ndị na-abịanụ.
N'etiti mgbanwe ndị bụ isi bụ nke ihe ọhụrụ interface interface, mara mma iji mee ka ọdịdị dị iche na nke egosiri na nsụgharị ndị gara aga dị iche. Tụkwasị na nke ahụ, agbakwunyewo ọtụtụ mgbanwe na ntọala ngwa ngwa, ihe nzuzo dị elu na ndozi na ihuenyo gbawara n'etiti, na akwụkwọ ọhụrụ ndị ọzọ a ga-achọpụta.
1 Ihe You, a kpamkpam ọhụrụ interface
2 New Mgbe niile na ihuenyo na akụkọ ndị ọzọ
3 Android 12 dị ka igodo ụgbọ ala
4 Nzuzo nzuzo ọhụrụ
5 Ọrụ CPU ka mma
6 Nkwalite ọdịyo
7 Na-agbanwe akwụkwọ mpịakọta
8 Ngwaọrụ enwere ike itinye ya
9 Nondị na-abụghị Google na-akwado gam akporo 12
Ihe You, a kpamkpam ọhụrụ interface
Isi ihe omuma putara na Android 12 abughi ihe ozo ma obu ohuru interface a na-akpọ Ihe,, dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnye ikuku ọhụrụ. The Preview nke iri na abụọ version nke gam akporo nyere ụfọdụ obere hints nke ọwọrọiso mgbanwe tụnyere gara aga version.
Na gam akporo 12 enwere akara ngosi ka ukwuu nke akara ngosi, akụkụ gbara gburugburu, ihe ndị nwere nha siri ike na ihe niile kachasị mma. Versiondị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ na-enyekwa ohere ịmegharị ya na agba ọhụrụ ya menus, imeghari dị ka ọ bụ ogwumagala, nke na-eme ya vasatail na otu na-aga maka ngwa.
Ọnọdụ gbara ọchịchịrị na-agbakwunye mgbanwe ndị dị mkpa, Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ejiri ya na ngwaọrụ na oge ụfọdụ nke ụbọchị ma ọ bụ jide ya kpamkpam. Na ngosi egosipụta nwere ọhụrụ animations, e wezụga ụfọdụ mgbanwe maka wijetị, na menu na windo.
Ihe You ga-ibido dị ka mgbe niile na-eme Google Pixel phones, ọ ga-eme ya na ọdịda na ihe a na-atụ anya ga-abụ nke ikpeazụ. Google na-agbasi mbọ ike iji kwadebe ya mgbe oge ọkọchị gachara, ya mere, ị nwere oge zuru ezu iji debug ya.
New Mgbe niile na ihuenyo na akụkọ ndị ọzọ
Ihe omuma ohuru na adi nma karie ohuru nke interface bu nke ohuru na ihuenyo, makwaara dị ka ihu igwe. Mmelite ahụ na-eweta wijetị na ụdị ọhụụ, yana mmegharị ahụ ịkwaga n'etiti ngwa ejirila nke ọma ma ọ na-ewetara ya otu usoro aka.
Ngwa ngwa ga-enye gị ohere ịtọ ngwa abụọ na gam akporo 12, yabụ ha abụọ ga-emeghe mgbe ịpịrị otu ma ọ bụ nke ọzọ. Ọ bụ ụzọ dị mfe iji jiri ngwa abụọ n'otu oge na ihuenyo ahụ, niile na-enweghị ekewa ya, yabụ ị ga-enwe ya dị ka ọkọlọtọ ma ghara iji nhọrọ dị n'ime ya.
Android 12 emegharịala ọtụtụ mgbe ị na-eji ekwentị na-egwu ọ bụla nke dị aha, na-eme ka ọ kasị mma ahụmahụ mgbe. Ogwe na-ese n'elu mmiri gụnyere ọtụtụ nhọrọ maka onye ọrụ, ihe niile edobere yana ịnọ na mmasị onye ọrụ.
Android 12 dị ka igodo ụgbọ ala
Ihe ohuru mara nma nke gam akporo 12 bu inwe ike iji ngwa mkpanaka dika igodo dijitalụ, na nke a ị nwere ike mepee ụgbọ ala ahụ, maka nke a ngwaọrụ ga-enwerịrị teknụzụ UWB (Ultra Wideband). Ndị mbụ ga - erite uru iji ya ga - abụ ekwentị Google Pixel na akara Samsung nke na - emelite ụdị nke 12.
Akara nke ga-anabata igodo dijitalụ na ngwaọrụ mkpanaka ga-abụ BMW German, ọ bụ ezie na emesịa ụdị ndị ọzọ ama ama dịka Honda, MG na American Ford ga-eme ya. Ngwaọrụ mbụ ga - enwe ike iji teknụzụ a site na njedebe nke afọ ọ ka ga-ahụkwa otú o si arụ ọrụ.
Ọnụ na UWB bụ ndị na-esonụ:
Samsung Galaxy Z nchekwa 2
Samsung Galaxy 20 Ultra bụ ekwentị ọhụrụ
Maka ugbu a, ha bụ otu n'ime ngwaọrụ ole na ole dakọtara na mmalite, mgbe ahụ ọ ga-eto dị ka Xiaomi bu nke a n’uche ma chọọ itinye ya na ngwaọrụ ha ndị ọzọ. Android 12 ga - eme ka ọtụtụ ndị nrụpụta gbanwee ngwa ngwa ma nwee ike jiri ya mee ihe dị ka isi.
Nzuzo nzuzo ọhụrụ
Nzuzo na-arụ ọrụ dị mkpa na gam akporo 12, isi ihe nke chọrọ imeziwanye mgbe nsụgharị ndị gara aga nwere nhọrọ dị n'ime ya na nke a. Oghere nzuzo nke ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ na-agbakwunye menu nke ọ ga-egosi gị ikikere nke ngwa ọ bụla na-eji.
Enwere ike ịhazi ogwe nzuzo nzuzo a mgbe ọ na-ewepu ma nye ikikere, a ga-egosikwa ya ozugbo ịmalite ngwaọrụ ma chọọ inye ụfọdụ ikikere ọ bụla ngwa ị na-eji. Gosi ụfọdụ levers iji rụọ ọrụ ma ọ bụ kwụsị ikike ọ bụla, ya mere ndụmọdụ kachasị mma bụ inye ndị ị tụkwasịrị obi.
Ọganihu Google gbakwunyere na gam akporo 12 bụ nke PCC, nke sụgharịrị bụ Private Compute Core. AI ga-eji kernel rụọ ọrụ n'ime ya ma ọ ga-eme ya na okwu ngwaike. Onwe Compute Core ga-echekwa data gị dị mkpa, ọ bụrụ onyonyo, vidiyo, na dọkụmentị.
Ọrụ CPU ka mma
Gam akporo 12 na-ekwe nkwa obere ihe oriri, ihe ruru 22%, ma ọ dịkarịa ala nke a bụ otú otu n'ime ndị injinia na Google I / O 2021 si mesie ya obi ike. ikpe na GPU (Graphical CPU).
Ojiji nke arụmọrụ di elu ga-ebelata ma ọ dịkarịa ala 15% ka oriri wee dị ala ma ọ ga-arụ ọrụ nke ọma ma a bịa inwe batrị maka ụbọchị niile. Ọ bụ isi ihe dị mkpa, ọ na-arụ ọrụ na ọtụtụ iji mee ka Android 12 dị arọ karịa Android 11.
Android 12 ga - emeziwanye na ụda ahụ, ihe niile n'ihi akwa mkpuchi, nke a ga - ejikọta na vidiyo, usoro a ga - akwado bụ HVEC. Na mgbakwunye, onyonyo dị na AVI ga-enwe mkpakọ na enweghị mmachi dị mma, na-ewere ihe dị mkpa iji jide faịlụ MKV.
A na-agbakwunye nkwado maka ọdịyo pụrụ iche, gụnyere na koodu MPEG-H na ngụkọta nke ọwa 24. Versiondị nke iri na abụọ na nke a na-emeziwanye na ọdịyo na vidiyo na onye ga-erite uru ga-abụ onye ọrụ, onye ga-enwe ike ịrụ ọrụ na ya mgbe ị na-agbanwe vidiyo na ekwentị.
Na-agbanwe akwụkwọ mpịakọta
Ihe ohuru nke edeputara na gam akporo 12 bu ihe na-agbanwe agbanwe, hụrụ na iPhone mbụ nke Apple wepụtara, Google na-eji patent na ntọhapụ ugbu a maka sọftụwia ya. Ihe mmegharị ahụ na-eme bouncing mmetụta ozugbo ị ruru na njedebe nke menu, dị ka ị na-ejide ya.
Mmetụta a na - agbatị leta ahụ, ọ bụ obere mgbanwe gbanwere nke ga - amasị ọtụtụ ndị na - eji sistemụ arụmọrụ gam akporo. Android 12 na-ewe nnukwu oge, nke ịgbakwunye akụkọ na-atọ ụtọ na otu n’ime ihe ndị dị mkpa bụ akwụkwọ mpịakọta ahụ, mana ọbụghị naanị ya.
Ngwaọrụ enwere ike itinye ya
Enwere ụdị ole na ole nke gam akporo 12 beta nwere ike itinyeN’etiti ha nke mbụ bụ pikselụ akara n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ya niile. Ha bụ ndị mbụ hụtụrụla etu beta si arụ ọrụ n'agbanyeghị na ọ nọ na beta, na-ahụ na echiche mbụ na-adị ezigbo mma.
Ewepu Google Pixels, enwere ọtụtụ ndị nrụpụta ekwentị nke kwenyere na ha nwere ike ịwụnye sistemụ arụmọrụ taa. Ndụmọdụ kachasị mma bụ ịnweta ụdị 11 arụnyere ugbu a na ekwentị ahụ, ọ bụrụ na ị ga-ewepu ozugbo ịnwale ya.
Pixel kwadoro ngwaọrụ ndị a:
Ọtụtụ ụdị ekwentị ama ama nwere nkwado maka ịnwale ụdị na ugbu a nọ na-etolite etolite, ma nke ahụ ga-edozi mmejọ. Enwere ọtụtụ ndị mmepe n'azụ ngwanrọ nke maka oge ahụ kuziri na usoro ndị gara aga.
Ndị nrụpụta akwadoro bụ: Samsung, Oppo, ASUS, Oneplus, Realme, Sharp, TCL, Tecno Mobile, ZTE na Xiaomi.
Nondị na-abụghị Google na-akwado gam akporo 12
Google site na peeji nke ndị mmepe Android gosipụtara mbụ ekwentị na-abụghị Pixel na nnwale edekọtara iji nwee ike ịnwale ya:
Oppo Cho X3 Pro
NG 20 Pro 5G
iQOO 7 Akụkọ Mgbe Ochie
Ọ fọdụrụ ikpughe ụdị nke ndị nrụpụta anọ nwere nkwado maka gam akporo 12Realme, Sharp, Tecno Mobile (akara ekwentị ndị China) na Oneplus so na ha. Naanị ihe a maara bụ ụdị ole na ole sitere na ụlọ ọrụ ọ bụla, yabụ ọ ga-anọgide na-ahụ ihe mmelite Google na ibe nkwado.
Beta nke abụọ nke gam akporo 12 ga-abata na ọnwa nke June, na ọnwa na-esote nke July nke atọ na August nke atọ ga-abịarute yana beta ikpeazụ. Mgbe August gasịrị, a ga-ewepụta nsụgharị ikpeazụ, maka ugbua na udu nmiri ka inwee ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Android 12 na-enye ọhụụ ọhụrụ na arụmọrụ yana mgbanwe dị egwu
Etu esi wụnye gam akporo 12 beta nzọụkwụ site nzọụkwụ
Egwuregwu ninja ise kacha mma maka gam akporo